अर्थतन्त्र सुधार गर
सम्पादकीय रविन गिरी
गठबन्धन सरकार मुलुकको राजनीतिक स्थिरताभन्दा सरकारमा सहभागी दलहरूको अनुचित स्वार्थपूर्तिमा उद्यत छ, जसको घानमा जनता परिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न के गर्ने, कसरी बच्ने ?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीलाई हराउन सामाजिक सञ्जाल मार्फत अविश्वास, घृणा फैलाउने गलत र मिथ्या सूचनाको बाढी आउन सक्छ। एउटा रूसी कथन छ- देभिर्‍याई,नो प्रेभिर्‍याई अर्थात् भरोसा गर, तर जाँच। हामीले अहिले यही जाँच्ने क्षमताको विकास गर्नु छ।
एमसीसीमा अलमल नगर
एमसीसीका नाममा लोकरिझ्याइँका खातिर जेजस्तो ‘राष्ट्रवाद–राजनीति’ भइरहेको छ, त्यसले हाम्रा दल, तिनका नेताको स्तर मात्र होइन, लोकतान्त्रिक देशकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याइरहेको छ, जसको परिणाम मूलतः जनताले भोग्नुपर्नेछ।
कविता सरकारका लागि हानिकारक छ !
ब्लग रविन गिरी
महामारीको यो वेला ‘आहा ! मेरो स्वाधीनता, मेरो स्वतन्त्रता भनेर कविता लेख्ने समय’ नभएको बताउने हाम्रा प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेका थिए, ‘कविता नसुन्ने मानिस भैंसी जस्तै हो ।’
वर्ष २०७७ः सादा जीवन, सानै विचार !
कोरोनाभाइरसको महामारीबाट संसारले के सिक्दैछ, थाहा पाउँदै जाउँला, तर नेपालीले सिक्ने कुरा भने ‘घाम जत्तिकै छर्लङ्ग’ छ ।
फिल्म 'द स्पन्सर' : विकास सहायतामाथिको कलात्मक व्यंग्य
दाताको सहयोगका नाममा गरीबको भावना र सामाजिक भाष्यमाथि खेल्ने शहरी मध्यमवर्गीय सोच विरुद्ध दरिलो व्यंग्य चलचित्र ‘द स्पन्सर’ मा देख्न पाइन्छ।
रणजितले हारे तर ‘रणहार’ले जित्यो
१८२६ सालमा आफ्नै मितछोरा पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमणमा भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा रणजित मल्लले हार बेहोरे । पृथ्वीनारायण भक्तपुरमा ‘राज’ भए । पराजित बैरागी रणजित काशी लागे । तर, आइतबार उनै राजा रणजितको हारको कथा लेख्ने योगेश राजले भने जित हासिल गरे । योगेश राजको ‘रणहार’ले मुलुकको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र सर्वाधिक पुरस्कार राशी (रु. ४ लाख)कोे मदन पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो । कस्तो थियो २५० वर्षअघिको भक्तपुर आक्रमण ? किन हारे त राजा रणजित ? ‘हिमालखबर’मा २०७५ असारमा छापिएको ‘रणहार’ समीक्षाः
स्वदेश बुझ्न स्नातकलगत्तै अमेरिकाबाट फर्किएकी उनी अहिले तस्वीर मार्फत समाज बुझाउने एक संस्था बनेकी छन्।
छालाको रङकै कारण अमेरिकाको ‘रनवे शो’ मा पटकपटक अस्वीकार गरिएकी वर्षा थापा अहिले विविधताकी प्रतिनिधि बनेकी छिन्।
केही मिठो 'बाट' गर...!
गुल्मीको विकट गाउँ अमरपुरको ठिटो जसै पासपोर्ट बनाउन परराष्ट्र हुँदै शिक्षा मन्त्रालय पुग्छन्, उनले आफू गैरकानूनी भएको पाउँछन् ।
‘सामान्य ज्ञान’ का पुस्तकहरूमा सोधिएका यी प्रश्नमा एउटै उत्तर भेटिन्छ– रणजित मल्ल । तर रणहार भन्छ, ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्ने अवसर रणजितका बुबा भूपतिन्द्रले नै पाइसकेका थिए ।
उर्दू जुवानका खातिर आफ्नो ठाउँमा अरुलाई पठाउने खयाली आज रहेनन् । लाग्दैछ– बाँकी नेपालले पनि खयाली गएको ‘ख्याल’ नै गरेन ।
‘सरकार हिमाल चिन्छ, हामीलाई चिन्दैन’
सगरमाथा, छोयू, ल्होत्से लगायतका थुप्रै हिमालको घर खुन्दे–खुम्जुङका गाउँलेमा सरकारले नहेरेको गुनासो छ ।
एक दिवसीय मान्यतालाई जोगाउने जिम्मा
आईसीसीको एसोसिएट सदस्य बनेको २२ वर्षपछि प्राप्त ‘एक दिवसीय मान्यता’ लाई जोगाइ राख्ने जिम्मेवारी खेल पदाधिकारी र सरकार दुवैको काँधमा छ ।
साथी बन्न सक्छु?
पुरुषले जति नै लैंगिक दुःख झेल्नु परे पनि त्यो महिलाको भन्दा कमै हुने भएकाले लैंगिक न्याय स्थापनामा पुरुषको दायित्व बढी छ।
काठमाडौंमा ‘कान्छा रे कान्छा रे’
नेपाली लोक बान्की टिपेर मन छुने सयौं गीतमा धुन दिएका सर्वाधिक सफल रञ्जित गजमेर आफ्नो सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आइपुगेका छन् ।